Creative Writing » ဝါသနာဘာဂီ…	170
ဦးကျောက်တို့လို ပုထုဇဉ်ဆိုတာ အာသဝေါကုန်ခမ်းနေတဲ့ ရဟန္တာမဟုတ်လေတော့ ချစ်ချင်းတရားနဲ့ ကင်းပြတ်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ သွားလေသူ ဦးသုမောင်ကြီးက “အဖိုးကလည်း အဖွားကို ချစ်တယ်ပြောမှာပဲ၊ အဖေကလည်းအမေ့ကို ချစ်တယ် ချစ်တယ်နဲ့၊ ကိုယ်ကလည်း မင်းကို ပြောပါမယ် ချစ်တယ်” လို့ သီဆိုသွားပေမည့်၊ တကယ်တမ်း မျက်နှာချင်းဆိုင် ရည်းစားစကားပြောဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ အရိပ်သုံးပါးနားမလည် အထာမသိရင် ကံမကောင်းလို့ကတော့ အနည်းလေး အဟောက်ခံ၊ မတော်မဆ ချစ်ဖျားတက်ပြီး လက်ဆွဲမိလို့ကတော့ ပါးရိုက်ခံရဖို့အထိ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ဆရာမင်းလူ ရေးသလို ဟိုးရှေးခေတ်က ကျောက်စာထိုးပြီး မော်ကွန်းတင်မတင် မသေခြာပေမည့်၊ ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ တော်ကီညက်ညက်နဲ့ ဖုန်းဆက်၊ မတ်ဆေ့ခ်ျပို့၊ အီးမေးလ်ရေးပြီး နှလုံးသားကို လှစ်ဟပြလို့ရတယ်ဆိုတော့၊ အတော်တိုးတက်လာတဲ့ သဘောကိုဆောင်တယ်ခင်ဗျ။ ဘာတဲ့… ဘုန်းကြီးလူထွက်တောင်၊ အွန်လိုင်းတက်ပြီး ချက်တင်ရိုက်လိုက်တာ ဩဇီသူနဲ့ ညားလေသတည်းဆိုတော့ အားရစရာကြီးပါ။
မောင်ကျောက်တို့ခေတ်က အဆောင်နေကျောင်းသားဘဝမှာ ဦးကိုင်ဇာကြီးရဲ့ သီချင်းလို “တယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ ချစ်ကြမယ်”ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။ တယ်လီဖုန်းက အာစီမှာရယ် အဆောင်မှူးအခန်းမှာရယ်ပဲ ရှိတာမို့၊ ချစ်သမျှကို လှစ်ဟလို့ဆိုချင်ရင် ရည်းစကားလိုက်ပြောရင်ပြော၊ အဲသည့်လောက် သတ္တိမရှိရင် ရည်းစားစာ လိုက်ပေးရတာပေါ့ခင်ဗျာ။ အဲသည်လိုအရေးမှာ ဒဂုံဆောင်တခွင် နာမည်ကျော်ကြား လူကြိုက်များတာကတော့၊ ရူပါမပွင့်ပေမည့် နည်းစနစ်ကောင်းပြီး လက်ရည်ထက်တဲ့ မောင်ကျောက်ခဲပါခင်ဗျာ။ ဘိုင်ပြတ်ရင် ဘီအီးတစ်ပိုင်းနဲ့လည်း အငှါးခံစားပေးတယ်ဆိုတော့၊ ချစ်သဝဏ်လွှာရေးပေးဖို့ မောင်ကျောက်အခန်းမှာ လူစည်တယ်ပေါ့ဗျာ။ မောင်ကျောက်ကောင်းမှုနဲ့ အကြောင်းပါသွားတဲ့သူတွေလည်း မနည်းမနောရှိတာမို့ ကျေးဇူးတင်ခံရသလို၊ လင်မယားရန်ဖြစ်တိုင်း သူတို့ ချစ်လင်တွေကို အပြစ်မမြင်ပဲ၊ အလှော်ကောင်းတဲ့ မောင်ကျောက်ကို တရားခံ နံပါတ် ၁ နေရာမှာထား၊ နာမည် တ ပြီးဆဲတာလည်း ခံရတယ်ခင်ဗျ။
မောင်ကျောက်ကတော့ မနာပါဘူး၊ ရည်းစားစာရေးပေးရုံတင်မဟုတ်၊ ကိုယ်တိုင်လည်း လိုက်တွန်းပေးထားတာဆိုတော့ “မပြေးသော်လည်း ကန်ရာရှိ” ဟုတ်နေတာကိုး။ ဒီလိုပါခင်ဗျာ၊ မောင်ကျောက်တို့ ဒဂုံဆောင်သား အေးမောင်ဆိုတာ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် အနေအေးသူပါ၊ ဒါပေသည့် အချစ်နဲ့တွေ့တော့ သူလည်း မအေးနိုင်ရှာတော့ပါဘူး။ ထမင်းစားဆောင်မှာ ထမင်းမစားခင် စပါးလုံးရွေးနေတုံး၊ အရင်းမရှိအဖျားမရှိ မနက်ဖြန် လှည်းတန်းက တောင်ကြီးစားသောက်ဆိုင်မှာ ဒကာခံပါရစေလို့ ဆိုလာပါတယ်။ အေးမောင် ဒီရက်ထဲ မူပျက်နေတာသတိထားမိတာမို့ ဘယ်အဆင်လာမယ်ဆိုတာ အတတ်သိတာပေါ့ဗျာ။ အဲသည်တော့ အေးမောင် တိုက်ကျွေးသမျှ သောက်စားပြီး တာဝန်ကျေအောင် ရည်းစားစာရေးပေးရတာပေါ့။ စာရေးပေးပြီး ၅ရက်လောက်နေတော့၊ အခြေအနေ စုံစမ်းကြည့်တာ၊ ကိုယ့်ဆရာ အေးမောင်က ကောင်မလေးလွယ်အိတ်ထဲ စာထည့်ပေးပြီးတည်းက ရှက်တော်မူရှာလို့ သွားတောင် မချောင်းပါဘူးတဲ့။ သယ်… ဒီငမိုက်သား၊ အူတီးအတ လူ့ဗာလကို ပို့မည့်ပို့ ကုတို့ရောက်အောင်ပို့မှဖြစ်တော့မယ် ဆိုပြီး၊ ကောင်မလေးအတန်းပြီးရင် လိုက်တွန်းဖို့ ပြင်ရတာပေါ့ဗျာ။
အေးမောင် ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးက ကမာရွတ် ကန်လမ်းထဲက ဆိုတော့ အတန်းပြီးရင် လှိုင်တက္ကသိုလ်ဝင်းကနေ အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်ပါသတဲ့။ သည်တော့ မောင်ကျောက်နဲ့ အေးမောင်၊ နောက်ကလိုက်ပြီး တွန်းကြတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေသည့် အလုပ်မဖြစ်ဘူးခင်ဗျ၊ ကောင်မလေးက ခိုးခိုးကြည့်ပြီး အထာပေး အသာလေး လမ်းလျှောက်နေတာကို၊ သတို့သား အေးမောင်က အနားရောက်သွားရင် ပုဆိုးပြင်ဝတ်လိုက်၊ ခေါင်းကုတ်လိုက်၊ နောက်ချန်နေခဲ့လိုက်၊ မောင်ကျောက်က အတင်းပြန်တွန်းလွှတ်လိုက်နဲ့ ရုပ်ပျက်နေတာပေါ့ခင်ဗျာ။ မောင်ကျောက်လည်း စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ မေးကြည့်တော့ “ငါ့… သူ့အနားရောက်ရင်၊ ဒူးတုန်ပြီး ပုဆိုးကျွတ်ချင်သလိုလို၊ ရှူးပေါက်ချင်သလိုလို ဖြစ်လာတယ်ကွ”လို့ ဖြေရှာပါတယ်။ ဒီပုံနဲ့တော့ မဖြစ်ခြေ၊ “ဇ” မရှိတဲ့ အေးမောင်ကို “အေး… မင်း မအာရဲရင် ငါလိုက် အာမယ်” လို့ ခပ်ဆတ်ဆတ်ပြောပြီး၊ တကယ် လိုက်အာတော့ ကောင်မလေးလည်း အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဟီ ဟိ အားရပါးရ “ဒိုင်ကြောင်”တွေလွှတ်ပြီးမှ “အဟီး အခုပြောတာ ဟိုကောင် အေးမောင် ကိုယ်စားပါခင်ဗျာ”လို့ စကားအဆုံးသတ်လိုက်တော့ “သူကိုယ်တိုင် ပြောပါစေ”တဲ့။ ဟီ ဟိ… ဒီလိုနဲ့ အောင်မြင်စွာ ပွဲသိမ်းလိုက်တာ၊ အခု ခလေး ၂ယောက်ရတဲ့ အထိဆိုတော့ မပွင့်တပွင့် မြုံစေ့စေ့ အေးမောင်ကို စိတ်တိုင်းမကျရင် မောင်ကျောက်ကိုဆဲတာ လွန်အံ့တော့ မထင်။
ပြန်ပြောရရင်တော့ မောင်ကျောက် ချစ်မှုရေးရာ နည်းပေးလမ်းပြ ကူညီခဲ့တာ အများသားဆိုတော့ ချစ်သူငယ်ချင်း ငပြားရဲ့ အခန်းဖော် စောလှိုင်လည်းပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ ငပြားက အခန်းထဲမှာ ဖဲဝိုင်းခိုးလုပ်ပါတယ်ဆိုမှ၊ စောလှိုင်က ဟိုဘက်ကုတင်ပေါ်မှာ စောင်ခြုံပြီး တဟင်းဟင်းနဲ့ သက်ပြင်းတွေချ၊ ချစ်ဆိပ်တွေတက်နေတာကို၊ ငပြားက လာဘ်တိတ်တယ်ဆိုပြီး တင်းပါတယ်။ အဲသည်တော့မဖြစ်ခြေ ဒီအရေးကို ငါကူပါ့မယ်၊ မင်းဘယ်သူ့ကိုကြိုက်နေတာလဲ မေးလိုက်မှ ဇူးမေဂျာက မောင်ကျောက် ဘော်ဘော် မိသင်း တဲ့လေ။ ဒီတော့ မောင်ကျောက်လည်း ဈာန်သွင်းလို့ စောလှိုင်နေရာကနေ အငှါးခံစားပြီးရေးလိုက်တာ၊ ဒီကောင့်ကို သူ့လက်ရေးနဲ့ ပြန်ကူးဖို့ ပေးလိုက်တော့ အဆဲခံရပါတယ်။
“တောက်… သောက်ကျိုးနဲကောင်းတဲ့ ရည်းစားစာ၊ အေပေး… မောင်ကျောက်၊ ငါတောင် မိသင်းကို ဒီလောက်စေ့စေ့စပ်စပ် မကြည့်ဖူးဘူး၊ ခွီး မင်း ကြိတ်ခိုက်နေတာလား”တဲ့ ဟီ ဟိ။
ဘော်ဘော်ချင်းဆိုတော့ မိသင်းကလည်း၊ လက်စခြေစကို မြင်ပါတယ်။ စောလှိုင် ရည်းစားစာပေးအပြီး စာပြန်လိုက်ပုံက…
“ကိုစောလှိုင် အဖြစ်မရှိတာသိနေတာမို့ လာပေးတဲ့ ရည်းစားစာက မောင်ကျောက်ရဲ့လက်ရာမှန်းသိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမ နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးလည်း စဉ်းစားတယ်၊ လက်ပေါ်နဖူးတင်ပြီးလည်း စဉ်းစားတယ်၊ စဉ်းစားတိုင်းလည်း ဒီအဖြေပါပဲ။ အဲဒါက ကျမ ကိုစောလှိုင်ကို ဘယ်လိုမှ မချစ်နိုင်ပါဘူး” တဲ့ ခင်ဗျာ။ မောင်ကျောက်လည်း စောလှိုင် ကြက်နာကြီးလည်လိမ်၊ လဒမှိုင် မှိုင်နေတာမကြည့်ရက်လို့ မိသင်းကိုလည်းတွန်း၊ စောလှိုင်ကို နည်းစနစ်ပြောင်းပြီး လုပ်ကြံခိုင်းလိုက်တာ အခုတော့၊ မိသင်းခမျာ စောလှိုင်ရဲ့ ဘယ်လက်ရုံးကို ခေါင်းအုံးအိပ်ရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျ။
အခုလည်းဗျာ အွန်လိုင်းမှာ ညင့်နက်သန်းခေါင် ထထပြီး ဂေါက်ရရှာတဲ့၊ ရွာသားညီငယ် ချစ်ဒုက္ခသည်ကို ဝါသနာဘာဂီ ဤအကျင့်ကို ပြင်နိုင်ရန်ခက်တာမို့ ကူမိပြန်သေးတယ်ခင်ဗျ။ ဒီမောင့် အချစ်ဖျားကလည်း ဒီဂရီ မသေးဘူးခင်ဗျ။ ဒါပေသည့် နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ပျော့ကွက်ဟာကွက်တွေရှိတာမို့၊ ဟောသည့်ငနဲ ဦးကျောက်ခဲကြီးက အသက်ကြီးမှ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် အွန်လိုင်းကနေ သင်ခန်းစာတွေပို့ချ၊ ရွာသူလေးကိုလည်း ဖျောင်းဖျ၊ တိုက်ကွက် အသစ်ပြောင်းလိုက်တာ ပြီးခဲ့တဲ့ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဝါဆိုလပြည့်နေ့ညက အီးမေးလ်ကနေ ဝှက်စာတစ်စောင် လက်ခံရရှိပါသတဲ့။ မောင်မင်းကြီးသား ဂဇက်ရွာအကျိုးတော်ဆောင်မင်း အူကြောင်ကြားနိုင်လိုက်ပုံက “အဲဒါ ဘာကြီးလဲ ဟင်”တဲ့။ ဟီ ဟိ ဝှက်စာလေးကတော့…
ကျောက်တုံးတောင် လှုပ်ပါများရင် နဲ့တတ်ပါတယ်….
ကျုပ်ကို ဘာမှ ပြန်မေးဖို့ မစဉ်းစားနဲ့
အခု သူတို့တွေ ချစ်သက်တမ်း ၁၅ရက်ပြည့်လို့ ဦးကျောက်ခဲ လက်ဆောင်ပြန်ရတာကတော့ “ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတိုင်း အူးလေးကို ထိုင်ကန်တော့မိတယ်” တဲ့လေ ဟီ ဟိ။ ကဲ… လူတတ်ကြီးလုပ်ပြီး ပြောလိုက်အုံးမယ်၊ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး သစ္စာရှိရှိနဲ့ ဘဝအောင်မြင် တိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးစားကြ၊ နားလည်မှု ရှိကြ၊ မ “ဂေါက်” ကြပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်းချင်သလို၊ သင်းလေးတို့တွေ အစဉ်ထာဝရ ရွှေလက်မြဲစေဖို့ ရွာ့လူကြီးများကလည်း ဆုံးမသွန်သင်ကြပါဦးလို့…
TheWinner Getprize says: ဒါပေမယ့်လည်း အင်းးးးးး ဟိုတစ်ယောက်တော့ ခေါင်းခေါက်တော့မယ်။။။။။
ဦးကျောက်ခဲ says: ခေါက်ပါနဲ့ဗျာ
ကျနော်တို့လည်း ငယ်ရာကကြီးလာတာ… ဟီ ဟိ
အခုအချိန်စိတ်တိုလို့ခေါင်းခေါက်ချင်ရင် ကျနော့်ကို ခေါက်ပါခင်ဗျား…
ကိုရင်စည်သူ says: လူဆိုတာအချစ်နဲ့ အသက်ရှင်နေကြတယ်ဆိုတာတော့ ဦးကျောက်စ်ရေးတဲ့
ဒီပို့စ်က သက်သေပြလိုက်ပါသည်။ ကွန့်မန်းပေါင်း ရာကျော်မတက်တာကြာပီ
ဖြစ်တဲ့ပို့စ်တွေထဲမှာ ယခုပို့စ်က အချစ်ဟာ မျှစ်လိုပဲ ခုတ်လေသန်လေ ရင့်လေ ပိုချိုလေဆိုတာ သက်သေပြသွားပါပီ။
Congratulation! ပါ။ အူးကျောက်စ်.. တဂယ်ဘာဗျာ.. အူးကျောက်စ်.. ကျော့်က သင်္ဘောသီးတွေထဲမှာ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင်
ဗဟုသုတအနည်းဆုံးသူဖြစ်ရို့.. သတို့သမီးအရံလေးတော့… ယုစ်လောက်တော့လုပ်လိုက်ပါနော့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ကရင်စည်သွပ်… ခင်ဗျားလား ဗဟုသုတနည်းတာ…
သတို့သမီးအရံလေးကတော့ ခင်ဗျားတို့ကို ချေးတွင်းထဲ ပြုတ်ကျပါစေတဲ့ ဟီ ဟိ
uncle gyi says: ရွာ့များနတ်ရှင်နဲ့အခုမှတွေ့ရတာနာတာပဲ
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟီ ဟိ ကျောက်စ်တို့ အိမ်နားမှာ
အသက် ၇၀ကျော်မှ ကိုယ်ပိုင်ခလေးကို ကျောင်းလိုက်ပို့နေရတဲ့…
လူစွမ်းကောင်း ဘိုးတော်ကြီးရှိသဗျ… ဟန်ကျချင်ရင် ဖြစ်ပါသေးတယ်…
surmi says: အဟမ်းးးးး
​နောက်​ထပ်​ တာဝန်​ရှိ ​ခေါင်းတစ်​လုံး​ခေါက်​ရန်​ အပ်​ပါ​ကြောင်းးး ဟုတ်​ကဲ့ …. ဦး​ကျောက်​နဲ့ ထပ်​တူထပ်​မျှပါခင်​ဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1432
cobra says: အခုလိုအားကိုးစရာလူရှိတာသိတော့အ၇မ်းကျေနပ်မိပါတယ်။
ဦးကျောက်ခဲ says: ခြေမှန်မှန်နဲ့ အနိုင်ဂိုးကို သွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်၊ နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို…
ဖာဂူလ်ဆန် တို့၊ မောရင်ဟို တို့လို… စိတ်ချလက်ချ အားကိုးလိုက်စမ်းပါ…
ကြိုဆိုပါတယ် အမောင် cobra…
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အဟမ်းးး အဟွတ် … အဟီးးးး
စောစောက အစပိုင်းက နောက်သလိုလို ပြောင်သလိုလို
ပြောထားခဲ့မိတာတွေ အတွက် ခွင့်လွှတ်ဂျစေဂျင်ဘာဒယ် ခည ….။
ဒီလို ကိုယ် မဟုတ်သလိုလိုနဲ့ နောက်ပြောင်ထားတာကလည်း ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူးဗျ
ချစ်လွန်းလို့ ခင်လွန်းလို့ နည်းနည်းလေး အုံးစားစေဂျင်လွန်းလို့ဘာ …. ဟီးးး
(အထက် အမိန့်အရ) အခုတော့ အတည်ပြောပါမယ် …..
ဟုတ်ပါတယ် ခညာ …. အများသိထားသလိုပါပဲ ….
ဥငေး၊ ဥဆာနဲ့တဂွ ဟိုအဖွဲ့ဂျီးရဲ့ အစွမ်းနဲ့ … (ကျုပ်အစွမ်းဒေါ့ ပါဝူး .. ကျုပ်က ပူလာရင် အိုက်လူဒွေဆီ ပြေးကပ်တာပဲ ချိဒါ … ဟီးးး)
ကျုပ်နဲ့ လုံမလေး တို့ဟာ ဥငေးကျောက်စ် ပေါထားဒလိုဘာဘဲလို့ … ဟီးးး
အိုက်ဒါ ရွာသူား ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ရွာ့လူဂျီး များဂ ဒီ နှီယောက်ကို မတော်ဒါချိရင် ဆုံးမပေးဂျဘာအုံးလို့ ….
ဟိုနေ့က ဦးဘလက်ချောကြီး က ဖုန်းဆက်လာတယ် ….
ညီလေး … ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်း ပါတဲ့ …..
တိန် …. ညက်လုံးဒွေ ဘာဒွေပါ ပြူးတွားဒယ် ….
ဒီလူဂျီး ဘိုလုပ်ပီး သိဒါဒုံးပေါ့ … သူ့ကွန်မန့်လည်း တွေ့ဘဲနဲ့နော့ ….
အဲ့အချိန်မှာ ကျုပ်ဘေးမှာ မွန်လည်း ရှိနေတယ် …
ပြန်ပြီး ပြောပြတော့ ရှက်ရှက်နဲ့ ပြုံးနေလေရဲ့ ….
ဖြစ်သမျှ စာစီကုံးပြရရင် ဆုံးမှာ ဟုတ်ဘူးးး
ပေါဂျင်ဒါဒွေဂဒေါ့ အားဂျီးဘဲ …. (အညင်ကတ်မှာစိုးညို့ ပေါဒေါ့ဘာဝူး)
ဒီဒေါ့ဂါ … လာပီး မထိဂျနဲ့တော့နော် ….
ပေါထားရက်နဲ့ ထိကပါး ရိကပါး လာလုပ်လို့ကတော့ တေတွားမယ် ….
အံစာတုံး တဲ့ …။ တစ်တုံးထဲ ရှိတယ် ..။ ဘာမှတ်နေလဲ …
ဥငေးကျောက်စ်၊ ဥဆာ၊ သဂျား၊ လင်းဆက်၊ ယောက်ခမ သော် (အခေါ်အရ)၊ မမကေဇက်၊ မမဂျီး (ဒီမမဂျီးဒွေဂို သိပ်တော့ မကြည်သေး) တို့ကိုလည်း ကျေးဇူး စပါယ့် စပါယ်ရှယ်ပါလို့ ….
အပျော်ဆုံး ၃ ယောက်ထဲမှာ ….
အလယ်က တစ်ယောက်က ငါ
ဦးကြောင်ကြီး says: အောင်မြလေး.. ဖြစ်နေလိုက်တာ… ဒီမှာ ငအံ… အမွန်နဲ့နင် မတွေ့ခင် သူ့ပေါင်ပေါ်ထိုင်နေတာ ဘယ်သူမှတ်တုံး…. ……….. ………….. ………….. ……………… ………….. …………… …………….. ……………………. …………….. ………………. ……. …… …………………………
ငါ…………ဘဲ………..ကွ…. မီညောင်…….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2204
koyinmaung says: အောင်မယ်..အောင်မယ်..
Nyein Nyein says: အခုမှပဲ အကြောင်းစုံကို ရှင်းတော့တယ်။ အဲလိုမှန်းသိရင် ဟိုနေ့က လိုက်နှောင့်ယှက်လိုက်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး သိရတော့ ၀မ်းသာလိုက်တာ။ မွန်မွန်ရေ… စိတ်တော့ဆိုးနဲ့နော်။ စတွေ့ကတည်းက ငြိမ်းက မွန်တို့နှစ်ယောက်ကို လိုက်တယ်ဆိုပြီး သဘောတူထားတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟီ ဟိ သူတို့ ၂ယောက်ကို အရင်းပြုပြီး ရွာထဲမှာ ပို့စ်တင်လိုက်တာ…
အခု မန့် ၁၄၀ဆိုတော့… အောင်ကြပါစေ မောင်တို့မယ်တို့…
လုံမလေးမွန်မွန် says: နာ ပေါဒါ မလွန်ပါဝူး.. တစ်ရွာလုံး တူ့ဘက်ကပါလို့… ဟင့်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3137
surmi says: အဟမ်းးးးး
ဒီအဖွဲ့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ မကြာခင် ထပ်မံ ပါလာရတော့မယ်ထင်မိပါကြောင်းးးး
Ma Ma says: ရွာ့ပါပါရာဇီ မိပြီ။ :-D
Wow says: ဆာဆာ ပြန်တူးဘီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ပျော်လိုက်တာဗျာ ၊ အပျော်တွေရင်ထဲကူးတယ် ။
ဖြစ်သေးပါဘူး… သင်းတို့ကို တစ်ခုတခု စီစဉ်ပေးမှ…
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟိ ဖော်မယ် … အဲ့ကဗျာရဲ့ ဒုတိယအလုံးတွေဖတ်ပါရန်…
ဘာတဲ့… အံစာတုံးကို ချစ်တယ် ဆိုလားဘဲ….
ကေဇီ says: ငင့်။။
ဪ ခေတ်ကာလ သားသမီးတွေ ဉာဏ်ကောင်းကြတယ်။
နာ့ အဲလို အဖြေပြန်ပေးတာတောင် ပိန်းတယ်လို့ ပြောပါတယ်ဆိုပြီး စိတ်ဆိုးနေဦးမှာ။ နာ အဖြေတောင်းထားတဲ့သူများ ရှင်းရှင်းပေးကြပါနော်။
ခုခိ ခုခိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1317
Crystalline says: စကားမစပ်… တူမကြီးရောနေကောင်းလား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: တစ်နှစ်တောင် ပြည့်တော့မယ်နော်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: Hee..
Ma Ma Gyi KZ, that dice didn’t know the meaning that day. He is so Pane too. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12395
ကေဇီ says: ဒင်း ပိန်းချက်ကတော့ ရပ်သိရွာသိ ပဲ။
အိမ်မှာ ပိန်းပန်းပင်တို့ ပိန်းဥတို့ စိုက်ရင် စီးပွါးဖြစ်လောက်မယ်။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အောင်မာ .. အောင်မာ ..
ငါ မရှိတုန်း သူတို့က အတင်း လာတုပ်နေဂျဒယ်ပေါ့လေ …
မပြောလိုက်ချင်ဘူး .. ဟွန်းးးး
sorrow says: အောင်မငီးဟဲ့ ….ကျောက်စ် ..တားတားကိုလဲရှာပေးပါဂျာ …ကောင်မလေးလန်းလန်းလေး တစ်ယောက်လောက်….အဟိဟိ
Ma Ma says: ဂေါက်…..
ချစ်တီးမကြီးဖြူဖွေး၏ အနောက်မှနေ၍ ယောင်းမဖြင့်ခေါက်သံ :-D
padonmar says: အခုမှပဲ အနက်ဖွင့်ကို သိတော့တယ်။
အင်း…..အောင်သွယ်တော် ဂဇက်လမင်းရယ်…..တိမ်ကြားကို ၀င်ကာမပြေးနဲ့…တောင်းပန်တယ် လို့ သီချင်းဆိုရမလိုပဲ။
surmi says: ကမ်းပင် ကမ်းလှမ်းသော်ငြား
ငှါးမည့်သူကားးးး မရှိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12395
ကေဇီ says: ငှါး မဲ့ သူရှိသော် ငြားလည်း ကျန်းမာရေးက မကောင်းးးးး
ယောက်ကမွပင်စင် ဆို ချွေးမလည်း ပင်စင်ပဲ။
alinsett (gazette) says: တားတားလည်း အလုပ်အပ်ဘရဇီ
ဒေါ်ဖွားမေထက် လှတာလေး တျောက်လောက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ကိုင်း… ၂ – နှစ် ပြည့်ပြီဗျား…
ဥုံ … အခုလည်း မဂေါက်နဲ့ နောင်လည်းမဂေါက်နဲ့…
နှစ်ကိုယ်တူအမြန်နီးဖို့အရေး ကြိုးစားကြပါလို့… ခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12395
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျောက်(စ)
နောက် ဇာတ်လမ်း လေး အတွက်ရော ရေးပေးပါ။
အောင် မိုးသူ says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: တွေးမိတိုင်း ဦးလေးကို ထိုင်ကန်တော့ချင်ပါတယ်ဆို.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ဆရာကျောက်စ်
သားသားကိုလည်း ရှာပေးပါ ၊ စူပါဝင်းမှာပြုစုပါ့မယ် ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: စိတ်ချ… ရှာပေးမယ် ကိုမြိုး…
မြေးချီချင်နေဘီလား… စောပါသေးတယ်ဗျ… ဟီ ဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ကျုပ်သားအတွက်ဟုတ်ဘူးဗျ
မရှာပေးရင် ခင်ဗျားလျို့ဝှက်ချက်တွေ ဖွင့်ချလိုက်မှာနော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: မီလုပ်ပါနဲ့ ဆြာမြိုးရယ်… ရှာဆိုရှာပေးပါ့မယ်… ခွိ စကားမစပ် ဟိုစကီလေး ဘယ်ရောက်တွားဒုန်း… အားဟိ
Mike says: .ပြန်လည်တူးဖေါ်ခြင်းအချစ်အပျော်ရက်စွဲများပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1991
CharTooLan says: ဘယ်​​တော့စားရမှာလဲ ဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: သများ အသက် ၃၀ မတိုင်ခင် စားရမယ် . ခု အသက် မမေးကြေး ဟိဟိ